သူငယ်ချင်းဆိုတာထက် မိသားစုလိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကို ထုတ်ပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင် – Shwe Yoe
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေးခေးဆက်သွင်ကိုတော့ နှင်းဆီ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့သလို သူရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေးဆက်သွင်ကတော့ သူ့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေကို မကြာခဏဆိုသလို မျှဝေလေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့အတူ “အဖြူရောင်ကို မြင်အောင်ကြည့်ရင် တကယ်ရှိပါတယ်…. သူတို့မှားနေရင် လမ်းပြဖို့ ကိုရှိသလို ကိုဆိုးနေရင် သူတို့ကထိန်းသိမ်းပြီးသားပါ…. ပိတောက်ပန်းလေး လမ်းမှာတွေ့လို့ လှလိုက်တာလို့ မပြောမိစေနဲ့ ကားရပ်ပြီး မရရအောင် ခူးပေးတဲ့သူမျိုးတွေ…. နတ်ပြည်ကနေ ငရဲထိ ကိုသွားချင်ရာသွား သူတို့ပါပြီးသား…..ပေးစားချင်တဲ့သူတွေ ကြိုက်သလိုပေးစား အမှန်တရားက အမြဲမခါးပါဘူး…. သူငယ်ချင်းထက် မိသားစုဆိုပိုမှန်မယ် …single Mom နဲ့ သူ့သားနှစ်ယောက်ပါ” ဆိုပြီးတော့ စနောက်ရေးသားထားတာပါ။
ခေးဆက်သွင်ကတော့ စိုပြေမြင့်နဲ့ဘုန်းဆက်သွင်တို့နဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေနဲ့အတူ single Mom နဲ့ သူ့သားနှစ်ယောက်ပါ ဆိုပြီးတော့လည်း နောက်ပြောင်ထားပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားသူတွေဘယ်လိုပြောပြော သူတို့ရဲ့ခင်မင်မှုကတော့ သူငယ်ချင်းလိုထက် မိသားစုလို ချစ်ခင်ရတဲ့အကြောင်းလည်း ပြောထားပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း မြင်ချင်သေးပါရဲ့နော်…
သရုပျဆောငျမငျးသမီးခြောလေးခေးဆကျသှငျကိုတော့ နှငျးဆီ ဇာတျရုပျနဲ့ ပရိသတျတှအေကွိုကျတှခေဲ့သလို သူရဲ့အနုပညာလှုပျရှားမှုလေးတှကေိုလညျး ပရိသတျတှေ စောငျ့မြှျောနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ခေးဆကျသှငျကတော့ သူ့ရဲ့နစေ့ဉျလှုပျရှားမှုတှကေို ပရိသတျတှကေို မကွာခဏဆိုသလို မြှဝလေရှေိ့သူဖွဈပါတယျ။
အခုလညျး သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူပြျောပြျောရှငျရှငျရိုကျကူးထားတဲ့ပုံလေးတှနေဲ့အတူ “အဖွူရောငျကို မွငျအောငျကွညျ့ရငျ တကယျရှိပါတယျ…. သူတို့မှားနရေငျ လမျးပွဖို့ ကိုရှိသလို ကိုဆိုးနရေငျ သူတို့ကထိနျးသိမျးပွီးသားပါ…. ပိတောကျပနျးလေး လမျးမှာတှလေို့ လှလိုကျတာလို့ မပွောမိစနေဲ့ ကားရပျပွီး မရရအောငျ ခူးပေးတဲ့သူမြိုးတှေ…. နတျပွညျကနေ ငရဲထိ ကိုသှားခငျြရာသှား သူတို့ပါပွီးသား…..ပေးစားခငျြတဲ့သူတှေ ကွိုကျသလိုပေးစား အမှနျတရားက အမွဲမခါးပါဘူး…. သူငယျခငျြးထကျ မိသားစုဆိုပိုမှနျမယျ …single Mom နဲ့ သူ့သားနှဈယောကျပါ” ဆိုပွီးတော့ စနောကျရေးသားထားတာပါ။
ခေးဆကျသှငျကတော့ စိုပွမွေငျ့နဲ့ဘုနျးဆကျသှငျတို့နဲ့အတူ ရိုကျကူးထားတဲ့ပုံတှနေဲ့အတူ single Mom နဲ့ သူ့သားနှဈယောကျပါ ဆိုပွီးတော့လညျး နောကျပွောငျထားပါသေးတယျ။ ဒါ့အပွငျ တခွားသူတှဘေယျလိုပွောပွော သူတို့ရဲ့ခငျမငျမှုကတော့ သူငယျခငျြးလိုထကျ မိသားစုလို ခဈြခငျရတဲ့အကွောငျးလညျး ပွောထားပါသေးတယျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူတူအနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေိုလညျး မွငျခငျြသေးပါရဲ့နျော…
သူမက မာယာများတယ်လို့ စွပ်စွဲနေကြတဲ့ သူတွေကို ပညာသားပါပါ နဲ့ တုံ့ပြန်ပြော လိုက်တဲ့ ပိုပို
သူမရဲ့ အနုပညာ စွမ်းအင်ကို ပြသလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင် ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
ဆက်ဆီကျကျ အလန်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ် အယ်လာ
လုံးဝကိုအမိုက်စားဖြစ်နေပြီး လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်းမှာ ရင်ခုန်ချင်စရာကောင်းအောင်လှနေ တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး ရဲ့ ပုံရိပ်များ